Maniry ny hijanonan'ny Travel sy ny fizahan-tany ny World Tourism Network
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Maniry ny hijanonan'ny Travel sy ny fizahan-tany ny World Tourism Network
The Tambajotra fizahan-tany manerantany mifanaraka amin'ny Birao fizahantany afrikanina (ATB) dia manentana ny vahoaka hametra ny fivezivezena amin'ny asa tena ilaina ihany.
Namoaka fanambarana ny alahady alina nataon'ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz. Cuthbert Ncube, filohan'ny ATB dia nanohana azy.
Ny vanim-potoanan'ny Noely sy ny Taom-baovao dia fotoana fitsidihan'izao tontolo izao ny fianakaviana. Fotoana handehanan'ny olona mitsangatsangana sy hankafy fialantsasatra koa izao.
Hafa ity vanim-potoana Krismasy sy taom-baovao amin'ny taona 2020/21 ity. Misy jiro any amin'ny faran'ny tionelina lava be iray hamakivakiana ilay nofy ratsy nandalovanay rehetra nanomboka ny volana martsa, saingy mbola ao anaty tionelina isika.
Ny antso an-tariby momba ny fifohazana omaly tany Angletera sy Afrika Atsimo izay nahatsapa fa voan'ny virus izao dia manafika amin'ny fomba hafa ary miaraka amin'ny hery 70% bebe kokoa dia vavolombelona fa tsy azo antoka izao ny dia. Zava-misy tsy ekentsika izany, ary marina fa tsy zakan'ny orinasa eto amintsika izany.
Ka andao isika hijanona tsy hijanona mandra-pahatongan'ny vokadratsin'ny fizarana vaksinim-pitomboana mitombo haingana sy valiny.
Raha ampitahaina amin'izay nolalovantsika rehetra dia tsy ho ela intsony izany. Raha miara-miasa isika rehetra dia ahafahantsika mandefa ny dia lavitra mialoha, ary manangana ny orinasan-tsika amin'ny taona ho avy.
Ny fitsangatsanganana ankehitriny miaraka amin'ireo fandrahonana vaovao vao niseho dia milalao amin'ny fahasalamantsika. Ny fitadiavana fomba izao hanamorana ny "fivezivezena soa aman-tsara" dia hiloka mety hampidi-doza ny toekarentsika sy ny hoavin'ny sehatra misy antsika.
Mila fanampiana ity indostria ity ary andao haka fotoana tsy hiasana isika hiadian-kevitra amin'ny fomba ahoana no ahafahan'izao tontolo izao miteny amin'ny feo iray sy hanohana an'ity indostria ity, hahafahantsika mitsambikina rehefa fotoana mety indrindra.
Vonona ny Network Tourism Network amin'ity dinika ity. Ny WTN amin'izao fotoana izao dia manana mpikambana maherin'ny 1000 antonony na kely orinasa any amin'ny firenena 124.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny WTN, mankanesa any www.tv.travel
Ny birao fizahan-tany afrikanina dia maniry ny hahatongavan'i Afrika ho mpizahatany iray ankafizin'izao tontolo izao. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny ATB, mankanesa any www.africantourismboard.com
Fipoahana volkano tampoka tampoka ao amin'ny nosy Hawaii
Nampiato ny sidina rehetra avy any Angletera i Canada